Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Badbaadada Kansarka Sambabada ayaa Kordhay
Astaanta Ururka Sambabada Ameerika
Warbixin Cusub: Badbaadinta Kansarka Sambabada ayaa kor u kacay, laakiin weli si weyn ayuu u hooseeyaa dadka midabka leh
cusub ee Warbixinta "State of Lung Cancer". ayaa daaha ka qaaday in heerka badbaadada kansarka sanbabada ee shanta sano uu kordhay 14.5% heer qaran ilaa 23.7% haddana aad uga hooseeya bulshooyinka midabka leh. Ururka Sambabada Ameerika 4th Warbixin sannadeedka, oo maanta la sii daayay, ayaa iftiimisay sida tirada kansarka sanbabada ay u kala duwan tahay gobolka waxayna baartaa tilmaamayaasha muhiimka ah ee Maraykanka oo dhan oo ay ku jiraan: xaalado cusub, badbaado, ogaanshaha hore, daaweynta qaliinka, daawaynta la'aanta iyo heerka baadhista.
Sida laga soo xigtay warbixinta, marka lagu daro heerarka badbaadada ee hooseeya, dadka midabka leh ee laga helay kansarka sanbabada ayaa la kulma natiijooyin ka sii xun marka la barbardhigo kuwa cadaanka ah, oo ay ku jiraan inay yar tahay in la ogaado goor hore, ay u yar tahay inay helaan daaweyn qalliin iyo inay u badan tahay inay helaan wax daaweyn ah. Tani waa sannadkii labaad ee warbixinta "State of Lung Cancer" ay sahamiso culayska kansarka sanbabada ee ka dhexeeya jinsiyadaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee heer qaran iyo heer gobol.
"Warbixintu waxay iftiimisay wararka muhiimka ah - dad badan ayaa ka badbaaday kansarka sanbabada; si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa xaqiiqda ah in, nasiib daro, kala duwanaanshiyaha caafimaadku uu u sii jiro bulshooyinka midabka leh. Dhab ahaantii, halka heerka badbaadada kansarka sambabada qaranku uu kordhay ilaa 23.7%, waxay ku sii jirtaa 20% oo keliya bulshooyinka midabka leh iyo 18% Black Americans. Qof kastaa wuxuu u qalmaa fursad uu ku hoggaamiyo nolol buuxda oo caafimaad qabta, markaa waa in wax badan la qabtaa si wax looga qabto kala duwanaanshiyaha caafimaadka, ”ayuu yidhi Harold Wimmer, Madaxweynaha Qaranka iyo Maamulaha Ururka Sambabada.
Ku dhawaad ​​236,000 oo qof oo Maraykanka ku nool ayaa sanadkan laga ogaan doonaa kansarka sanbabada. Warbixinta 2021 "State of Kansarka Sambabada" waxay heshay isbeddellada qaran ee soo socda ee heerarka badbaadada, ogaanshaha hore, iyo daaweynta cudurka:
Heerka badbaadada: Kansarka sanbabada ayaa leh mid ka mid ah heerarka badbaadada ee shanta sano ee ugu hooseeya sababtoo ah kiisaska waxaa badanaa la ogaadaa marxaladaha dambe, marka ay u badan tahay in la daweyn karo. Celceliska qaranka ee dadka nool shan sano kadib ogaanshaha kansarka sanbabada waa 23.7%. Heerarka badbaadadu waxay ahaayeen kuwa ugu wanaagsan Connecticut 28.8%, halka Alabama ay gashay ugu liidatay 18.4%.
Ogaanshaha Hore: Qaran ahaan, kaliya 24% ee kiisaska ayaa la ogaadaa marxaladda hore marka heerka badbaadada shanta sano uu aad u sarreeyo (60%). Nasiib darro, 46% kiisaska lama qabto illaa marxaladda dambe marka heerka badbaadadu uu yahay 6% oo keliya. Heerarka ogaanshaha hore ayaa ugu fiicnaa Massachusetts (30%), iyo ugu xumaa Hawaii (19%).
Baaritaanka Kansarka Sambabada: Baaritaanka kansarka sanbabada oo leh CT scans oo qiyaas yar oo sanadle ah oo loogu talagalay kuwa khatarta sare leh waxay hoos u dhigi kartaa heerka dhimashada kansarka sanbabada ilaa 20%. Qaran ahaan, kaliya 5.7% kuwa halista sare ku jira ayaa la baadhay. Massachusetts ayaa leh heerka ugu sarreeya ee baaritaanka 17.8%, halka California iyo Wyoming ay leeyihiin kuwa ugu hooseeya 1.0%.
Qalliinka oo ah koorsada koowaad ee daawayntaKansarka sambabada inta badan waxa lagu daweyn karaa qaliin hadii lagu ogaado marxalad hore oo aanu faafin. Qaran ahaan, kaliya 20.7% kiisaska ayaa la qalay.
Daawo La'aanta: Waxaa jira sababo badan oo ay bukaanadu u heli waayeen daawaynta ka dib ogaanshaha cudurka. Qaar ka mid ah sababahan ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo aan laga fursan karin, laakiin qofna waa inaan la daweyn sababtoo ah bixiye la'aan ama aqoonta bukaanka, dhaleeceynta la xiriirta kansarka sanbabada, dhimashada dhimashada ka dib ogaanshaha, ama kharashka daaweynta. Qaran ahaan, 21.1% kiisaska ma helaan wax daaweyn ah.
Daboolista Medicaid: Barnaamijyada Medicaid-ka ee gobolka ayaa ah mid ka mid ah bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ee aan looga baahnayn inay daboosho baadhista kansarka sanbabada ee dadka khatarta sare leh. Ururka Sambabku waxa uu falanqeeyay siyaasadaha daboolida baadhista kansarka sanbabada ee barnaamijyada khidmadda-adeegga Medicaid ee gobolka si loo qiimeeyo heerka hadda ee caymiska baadhista kansarka sanbabada ee dadweynaha Medicaid oo ay ogaadeen in 40 gobol ee barnaamijyada khidmadaha adeegga Medicaid ay daboolayaan baadhista kansarka sanbabada, toddobo barnaamij ma bixiyaan caymis, saddex gobolna ma helin macluumaadka laga heli karo siyaasadda caymiskooda.
Iyadoo natiijooyinka warbixinta "State of Kansarka sambabada" ay muujinayaan shaqo muhiim ah oo la qabanayo, waxaa jirta rajo. Bishii Maarso 2021, Kooxda Hawsha Adeegyada Ka Hortagga ee Mareykanka ayaa balaarisay taladeeda baaritaanka si loogu daro da' weyn iyo kuwa hadda jira ama hore u ahaan jiray sigaarka. Tani waxay si aad ah u kordhisay tirada haweenka iyo dadka madow ee Maraykanka ah ee u qalma baaritaanka kansarka sanbabada.
Ururka Sambabada ayaa ku dhiirigeliyay qof walba inuu ku biiro dadaalka lagu joojinayo kansarka sanbabada. Tag Lung.org/solc si aad wax badan uga ogaato kansarka sanbabada ee gobolkaaga oo saxeex codsigayaga kordhinta maalgelinta Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada si looga ilaaliyo caafimaadka qarankeena cudurada, oo uu ku jiro kansarka sanbabada.
Sigaar cabbayaasha hadda iyo kuwii hore, waxaa jira ilo nafo lagu badbaadiyo. Soo ogow haddii aad xaq u leedahay baadhista kansarka sanbabada SavedByTheScan.org, ka dibna kala hadal dhakhtarkaaga sidii lagugu baari lahaa.